(Sawiro) Wasiirka Caafimaadka Puntland Oo Gaaray Degmada Baran, Xarigana Ka Jaray Xarun Caafimaad | puntlandi.com
(Sawiro) Wasiirka Caafimaadka Puntland Oo Gaaray Degmada Baran, Xarigana Ka Jaray Xarun Caafimaad
Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Dawladda Puntland Dr. C/naasir Cismaan Ciise iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ku yimid gobolka Sanaag, Waxana si diirran usoo dhoweeyey Mas’uuliyiinta gobolka , mas’uuliyiinta degmada iyo bahda Caafimaadka ee gobolka .
Wasiirka oo ay safarka ku weheliyaan Agaasimaha Guud ee Wasaarada Dr. C/risaaq Xirsi Xasan, Agaasimaha Caafimaadka Asaasiga ah Dr. C/risaaq Abshir Gadhweyne iyo Agaasima Daawada iyo Hospitallada Dr. C/raxmaan Maxamed Cabdi , ayaa waxa ujeedkoodu ahaa iney arkaan shaqada 8 kooxood oo hawlo caafimaad oo deg deg ah ka wada gobolka Sanaag , iney arkaan baahida Caafimaad ee gobolka kajirta iyo iney daah furaan xarunta Nafaqaynta caruurta oo lagu kordhiyey Hospitalka magaalada Badhan .
Guddoomiyaha Gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon oo la hadlay Warsidaha Puntlandi, ayaa sheegay in Wasiirka iyo wefdigiisu ay kormeer kusoo mareen xarumaha Caafimaad iyo Machadka Umulisooyinka iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee magaalada Badhan .
”Wasiirka iyo Wafdigiisu waxay waraysi ka qaateen maamulka gobolka, maamulka degmada iyo bulshada qaybeheeda kala duwan . waxana ay booqdeen dhismaha jaamacada Maakhir oo iminka shaqadii la dhameeyey” Ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon oo hadalkiisa sii wata.
Wuxuu intaas ku daray Guddoomiyaha Gobolka Sanaag iyo Mas’uuliyiinta Wasaaradda Caafimaadku ay sido kale u kuur galeen Abaaraha ka jira Gobolka, ayna ku baaqeen in wax laga qabto Abaaraha.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Dawladda Puntland Dr. C/naasir Cismaan Ciise, ayaa xadhigga ka jaray xarunta nafaqaynta caruurta oo lagu kordhiyey Hospital ka guud ee magaalada Badhan.
Ugu dambayntii Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon ayaa u mahadceliyay Wasiirka Caafimaadka iyo Wafdigiisa, wuxuuna sheegay in Wasiirku uu gobolka yimi xilli muhiimad balaaran uu xambaarsana safarka uu ku yimi.